Obbo Gabruu Asraat: Dr. Abiyyii fi obbo Dammaqaa morkattoota cimoodha - BBC News Afaan Oromoo
Obbo Gabruu Asraat: Dr. Abiyyii fi obbo Dammaqaa morkattoota cimoodha
Ministira muummee biyyattii walgahii mana maree ADWUI torban dhufutti karoorfameen morkattoonni ciccimoon lama jiraachuu, hoogganaan gameessi ABBUT(TPLF) duraanii fi hoogganaan dhaaba mormituu Madrak ammaa Obbo Gabruu Asraat himan.
Akka Obbo Gabruun jedhanitti filannoon ministira mummee bu'aa hariiroo dhaabbilee afran ADWUI hundeessaniiti.
''Hariiroo dhaaba sana keessa amma jiru hin beeku. Haala amma jiruun garuu morkattoonni lama ni jiraatu. Inni duraa obbo Dammaqaa Mokonniin ta'uu, kan lammataa ammoo Dr. Abiyyi Ahimadi'' jedhan.
''Obbo Dammaqaan itti aanaa Ministira muummee turan. Qeeqni hamaan irratti ka'ee, hojii gaarii hin hojjenne yoo jedhamuu baatan, itti aanaatu bakka ministira muummichaa qabata'' jedhan adeemsa filannoo dhaaba ADWUI yoo himan.
Kaadhimamaan inni lammataa ammoo haala siyaasaa amma jiru keessatti ADWUI keessatti dhaaba caalee mul'achaa jiru DHDUO irraa ta'a jedhan.
''Sirna hooggansaa isaan sirna ADWUI baratameen adda of godhee bahe fi gaaffii uummata Itoophiyaas ni deebisna dhaadannoo jedhu, akka dhaabaatti kan qabatanii bahanirraa Dr Abiyyi dorgomaa isa biro ta'u'' jedhaniiru.
Hojimaata ADWUI'n mana maree dhaabichaatti dhaabbileen afranuu mata mataan miseensa 45 qabaatu.
''Guddaa xiqqaa kan jedhu hin jiru, hunduu sagalee walqixa qabu. Filatamaan dhaaba isaan dabalatatti dhaaba biroo irraa sagalee deeggarsaa nama tokkoo argate, kaadhimamaa isa biraa caale ni filatama,'' akka Obbo Gabruutti.
Kaadhimatoonni dhaaba DHDUOs ta'e DHDUA sagalee deeggarsaa dhaabota biroo lamaan yoo hin argatiin rakkisaa ta'as jedhan.
Kaadhimamtoonni sagalee walqixaa yoo argatan, adeemsi filannoon adda baasuu itti fufa. Akka dhaabaattis marii biraa taasisuun dirqisiisaa akka ta'us obbo Gabruun ibsaniiru.
''Sirni ADWUI biyyattii hidhee qabe gidduu galummaa dimookraasummaa jedhudha. Adeemsi miseensi mana maree tokko dirqiidhaan bakka bu'aa dhaaba isaaf qofa sagalee kennuu qaba jedhu hin jiru. Miseensa dhaaba isaan ala kaadhimamaa dhiyaateef sagalee kennuu danda'a. Sagaleen kan kennamu icciitiidhaan waan ta'eef hojimaataan wanti dhorkame hin jirus'' jechuun Obbo Gabruun BBC'f himaniiru.